Shiinaha Sport Garabka Brace Neoprene Garbaha Elastic Support qeybiye warshad iyo alaab | Caafimaadka Shiheng
Sport Garabka Braop Neoprene Garbihiisa Garbaha Elastic
Xanuun daran oo joogto ah iyo caabuq ay keento xumaanshaha garabka wadajirka iyo dhaawaca unugyada jilicsan ee ku hareeraysan, hemiplegia oo ay keento hemiplegia.
Magaca: Garbaha garbaha
Waxyaabaha: Cajalado Katton iyo nylon ah
Shaqaynta: Adoo isticmaalaya dhar dibedda laga keenay, oo jilicsan oo jilicsan, waxaad siisaa neefsasho fiican iyo raaxo leh. Naqshad furan, xidho raaxo, ku habboon, cabbir laastik ah oo la hagaajin karo.
Feature: Garabkaaga ilaali
Cabir: Cabir Bilaash ah Ragga iyo Haweenka (Bidix / Midig)
S Wuxuu ka samaysan yahay cajalado cudbi ah iyo cudbi naylo ah, naqshad neefsasho leh oo aad u jilicsan.
Pain Xanuun daran oo joogto ah iyo caabuq ay keento xumaanshaha garabka wadajirka iyo dhaawaca unugyada ku xeeran, hemiplegia oo ay keento hemiplegia.
Tissue Unugyada hareeraha ku yaal waxay bixiyaan taageero, xasillooni, ilaalinta kuleylka iyo xanuunka deegaanka.
Shoulder Garabkeennu wuxuu dareemi doonaa xanuun mararka qaarkood, waad xiran kartaa taageerada garabkan markii aad sameyneyso jimicsi, sida orodka, ciyaarta kubbadda koleyga, kubbadda cagta iyo cayaaraha kale.
Belt Suunkaan garbaha loo isticmaalo looma isticmaalo kaliya caafimaadka, laakiin sidoo kale isboortiga. Sidoo kale way fududahay in la shaqeeyo, waad ku hagaajin kartaa naftaada.
Wuxuu ka samaysan yahay cajalado cudbi ah iyo naylo ah, naqshad neefsasho leh oo aad u jilicsan. Xanuun daran oo joogto ah iyo caabuq ay keento xumaanshaha garabka wadajirka iyo dhaawaca unugyada jilicsan ee ku hareeraysan, hemiplegia oo ay keento hemiplegia. Nudaha ku wareegsan ayaa bixiya taageero, xasilooni, ilaalinta kuleylka iyo xanuunka deegaanka. Garabkeennu wuxuu dareemi doonaa xanuun mararka qaarkood, waad xiran kartaa taageerada garabkaan markaad sameynayso jimicsi, sida orodka, kubbadda koleyga, kubbadda cagta iyo cayaaraha kale. Suunkaan garbaha garbaha looma isticmaalo oo kaliya caafimaadka, laakiin sidoo kale isboortiga. Sidoo kale way fududahay in la shaqeeyo, waad ku hagaajin kartaa naftaada. Taageero, isku-xoqid diiran iyo ilaalinta garabka jilicsan ama dhaawacmay. Caawinaad ku saabsan xaaladaha Rotator Cuff Tendinitis (caabuq ku dhaca jilibka oo dhaqaajiya garabka wadajirka ah) sababtoo ah muuqaal xumo markaad fadhido ama seexato, qaab liidata markaad jimicsi sameyneyso ama cadaadis soo noqnoqda | Bursitis (caabuq ku dhaca kiishashka dheecaanka ee garabka wadajir) | Kala-bixidda garabka dhaawaca shilka awgiis. Waxay yareysaa caabuqa, xanuunka iyo xasillooni darrada garabka. Wuxuu daweeyaa murgacasho iyo muruqyo yar yar, Cudurka Osteoarthritis iyo Rheumatoid. Arthritis-ka ee garabka wadajirka ah, Waxay bixisaa cadaadis iyo daaweynta kuleylka jimicsiga ama dhaawacyada dhaqdhaqaaqa. Waxay kaa caawineysaa yareynta fursadaha dhaawac dheeraad ah ee waayeelka. Hal cabir ayaa ku habboon inta badan (Laab: 66 - 91.4 cm, Arm Cuff: 22 - 30 cm), sidoo kale waxaa lagu heli karaa nooc gaar ah oo lagu daray cabirkiisa ..Waa sahlan tahay inaad xirto oo aad iska saarto iskeed ama gargaar yar. Waa la gashan karaa dharka hoostiisa sidoo kale gudaha oo jilicsan. Badeecadu waa afar-waasac oo la kala bixin karo oo leh jirka neoprene neefta leh, kaas oo dammaanad qaadaya isku-xoqitaan raaxo leh, xajin hagaagsan iyo adkeysi. Waxay ku caawisaa bogsashada degdegga dhaawaca haynta kuleylka jirka ee dabiiciga ah ee xanuunka yareeya. Waxay bixisaa dhakhso midab wanaagsan iyo bilicsanaanta rafcaanka
Dhig suunka gacanta sare
En suufka adke
● ku dheji labada xarig ee wicitaanka dhinaca kale ee jirka iyadoo loo eegayo xaaladda jabka
● dhaawaca garabka
Cold Qabow Shouler
Hore: Dhaqdhaqaaqa muuqaalka ugu caansan ee Dib-u-habeyn Lagu Sameeyo Taageerada Dadka Waaweyn
Xiga: Suunka Caafimaadka Dhexdiisa oo leh Qalabka Taageerada Birta
Tayada Sare ee Wrsist Hand Hand Soft Dhar Carpal ...
Dhaqdhaqaaqa muuqaalka ugu caansan ee dib loo hagaajin karo ...
Aluminiinta farta firfircoon ee caafimaad ee Aluminium
Shiinaha Factory Neck Brace Orthopedic Soft xumbo C ...
Isku-xidhka Qoorta Isku-xidhka leh 'Tourmaline Magnet'
Aluminium farta ilaaliyaha ah